Krizy Masina ihany koa ho an'ny fizahan-tany any Jerosalema: mpitaingina metaly Mount Over Al-Aqsa
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Israely » Krizy Masina ihany koa ho an'ny fizahan-tany any Jerosalema: mpitaingina metaly Mount Over Al-Aqsa
Jolay 23, 2017
Rehefa mitsidika an'i Jerosalema dia mpizahatany maro no maniry ny hitsidika ny Temple Mount sy ny Dome of the Rock. Ny Temple Mount dia tranokala masina ao an-tanàna taloha ho an'ny Jiosy, Kristiana ary Silamo. Ny mpitsidika rehetra dia afaka mitsidika ny fitambarana sy ny Moske Al-Aqsa, afa-tsy ny Dome of the Rock.
Ny fihenan-tsofina sy ny fifandonana nahafaty olona enina dia niteraka tahotra omaly ny amin'ny mety hisian'ny herisetra israeliana-palestiniana rehefa misy ny fihenjanana noho ny fandriam-pahalemana vaovao ao amin'ny toerana masina any Jerosalema izay marefo.
Tamin'ny 19 jolay “Andro iray amin'ny fahatezerana” dia nambaran'ny antoko Fahefana Palestiniana Mahmoud Abbas 'Fatah antoko, ho setrin'ny fametrahana ireo mpamily vy amin'ny fidirana amin'ny Tendrombohitra Temple of Jerusalem - fantatry ny Silamo amin'ny anarana hoe Haram Al-Sharif - -Aqsa mosque no misy.
Ny fametrahana dia natao taorian'ny fanenjehana ny zoma lasa teo tao amin'ny toerana masina, izay nitifitra ny Arab-Israeliana telo, ka nahafaty polisy roa israeliana - Hail Stawi, 30 taona, ary Kamil Shanan, 22 taona, samy Silamo Druze - ary naratra ny ampahatelony . Taorian'izay, nandray ny dingana mampiady hevitra ihany koa i Isiraely amin'ny fanakanana tanteraka ny fidirana amin'ilay complexe nandritra ny roa andro.
Nolavin'ny palestiniana ny faneriterena israeliana fa takiana ireo mpikaroka vy manoloana ny herisetra sy ny fampiasana fitaovam-piadiana.
Niresaka tamin'ny The Media Line, Jamal Muhaisen, mpikambana ao amin'ny Komitin'ny foiben'i Fatah, nilaza fa ny hetsi-panoherana dia kasaina hatao manerana ny moron'i West, "ny dingana voalohany amin'ny dingana lehibe hataontsika raha tsy esorin'i Israel ny vavahady elektronika."
"Resaka politika io fa tsy resaka filaminana," hoy izy nanitrikitrika. “Manandrana mampitombo ny fisiany eo amin'ny toerana masina i Israel ary hiatrika izany izahay. Toherinay hatramin'ny farany ireo mpikaroka, na dia tsy maintsy vonoinay amin'ny tanantsika aza izany. ” Niantso ny governemanta israeliana i Muhaisen mba hiova lalana amin'ny faran'ny volana, na i Fatah no hanomboka ny dingana manaraka amin'ny drafiny.
Rehefa nifandona ny alarobia dia namoaka fanambarana miaro ny fanapaha-kevitry ny governemanta ny ben'ny tanànan'i Nir Barkat, izay nofaritany ho fepetra mety hisorohana ny fanafihana amin'ny ho avy: "Tokony ho takatr'izao tontolo izao fa ny Temple Mount dia tsy azo atao fialofana na drafitra sy toeram-pivoriana ho an'ireo mpampihorohoro sy mpamono olona.… Manoro hevitra ireo mpikomy aho mba hikendry ny mpampihorohoro izay namorona ny filàna [ireo mpamantatra vy] fa tsy ny polisy. ”
Izany dia fihetseham-po zarain'ny besinimaro Israeliana sy ny ankamaroan'ny parlemantera ao aminy; izany hoe, ankoatry ny mpikambana ao amin'ny lisitra Joint [Arabo], izay nisedra olana lehibe momba izany, manaporofo ny fisaraham-bazana eo amin'ny fiaraha-monina izay nifototra indrindra tamin'ny foko sy ara-pinoana. Ireo fihenjanana ireo dia mipaka hatrany amin'ny faritany palestiniana - mankany amin'ny tontolo arabo-islamika amin'ny ankapobeny - izay ahitan-doza toy ny fanakorontanana ireo mpitsikilo vy; manohitra ny "quo quo" efa hatry ny ela tao amin'ny Temple Mount, andiam-pitsipika sy marimaritra iraisana izay fototry ny fifandraisana eo amin'ny Jiosy, ny Kristiana ary ny Silamo ao amin'io toerana io.
Amin'ny lafiny iray, ny praiminisitra PA Rami Hamdallah dia niantso ny vondrona iraisam-pirenena sy ny fanjakana Arabo sy Silamo “mba handray andraikitra amin'ny… fampijanonana ny fepetra amin'ny fanjanahana, izay mifanohitra amin'ny lalàna, fifanarahana ary ny sata iraisam-pirenena.”
“Ny zava-mitranga,” hoy i Hamdallah nampitandrina, “dia ny herisetra mahery vaika sy drafitra israeliana mampidi-doza… izay hampitombo ny fifanenjanana ao Jerosalema sy ny faritra, [izay mety hiteraka] ady ara-pinoana.”
Mandritra izany fotoana izany, ireo tompon'andraikitra avy ao amin'ny Waqf - ny Trust Muslim, vondrona fitantanan-draharaha izay manara-maso ireo toerana masina Silamo ao Jerosalema izay notantanan'ny jeneraly Jordania tamin'ny fandraisana andraikitra nataon'ny Israel - dia nanao hetsi-panoheran'izy ireo tao amin'ny Tanàna Tanana, namporisika ireo mpivavaka mba hitsahatra tsy hitsidika an'i al-Aqsa tanteraka. Ny hetsika farany indrindra dia ny fanapahan-kevitra hanakatona ny moske rehetra ao Jerosalema amin'ny zoma amin'ny ezaka hanangonana mpivavaka an'arivony - sy mpanao fihetsiketsehana - eo am-bavahadin'ny Tendrombohitra Temple.
Anisan'ny vahoaka Silamo ao an-toerana ny fahatezerana: "Tsy azo eritreretina ny sazy ara-pivavahana", hoy i Rateb, 38 taona, mponina ao amin'ny faritra Wadi al-Joz any atsinanan'i Jerosalema, tamin'ny The Media Line. “Al-Aqsa dia iray amin'ireo toerana masina indrindra eto an-tany ary ny Israeliana dia mandrangitra ny olona amin'izay ataony.”
Khadeja, mponina iray hafa any atsinanan'i Jerosalema, dia mino fa manandrana mifehy ny faritra i Israel: nilaza tamin'ny The Media Line izy fa “miatrika fanitsakitsahana isan'andro ny moske. Nofoanan'ny Isiraely ny andraikitry ny Waqf, ary ny fametrahana ireo mpamantatra vy dia fanalam-baraka ho an'ny Silamo.
“Tranonay io,” hoy izy namarana ny teniny, “ary tsy mandalo fanaraha-maso alohan'ny hidiranao ao an-trano ianao.”
Ny mety hisian'ny herisetra misimisy dia natao tamin'ny talata lasa teo, satria nisy ny fifandonana nandritra ny alina mahitsy fahatelo teo amin'ny silamo an-jatony sy ny mpitandro ny filaminana israeliana akaikin'io toerana io. Araka ny filazan'ny polisy avy ao an-toerana, taorian'ny vavaka hariva dia nisy andiana mpivavaka “nanomboka nitora-bato sy tavoahangy an'ireo manamboninahitra” napetraka tao amin'ny Old City. Ny fampahalalam-baovao palestiniana dia nitatitra fa am-polony no naratra, niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana Israeliana roa. Nandritra izany, ny fiandohan'ny alarobia lasa teo, ny komandin'ny polisy ao amin'ny Distrikan'i Jerusalem dia nandidy ny hanakatonana ny Temple Mount ho an'ny tsy Silamo, taorian'ny nanesorana andiana mpitsidika jiosy noho ny fivavahana, fanitsakitsahana ny “quo quo”.
Ny fahatsapana, ny hamafiny ary ny nipoaka ny toe-draharaha, miaraka amin'ny fiantraikany manerantany, dia nanosika ny Mpanjaka Salman Saudi Arabia hiditra an-tsehatra mivantana amin'ny fiantsoana an'i Washington hiasa ho mpanelanelana amin'ny ezaka hamahana ny krizy. Ho valin'izany, ny praiminisitra israeliana Binyamin Netanyahu dia voalaza fa nanasa ireo tompon'andraikitra Saodiana hitsidika an'i al-Aqsa mba hahitany mialoha fa tena mipetraka io toerana io.
Saingy toa manjavozavo ireo andalana. Atahorana, mirongatra ny fihenjanana, toe-javatra mahazatra loatra loatra; ny voka-dratsy, araka ny noporofoin'ny tantaran'ny faritra, dia mety hampihoron-koditra.
Dima Abumaria dia nandray anjara tamin'ity tatitra ity
Oram-be, tondra-drano any avaratra atsinanan'i Japana: olona 25,000 no nandidy, 65,000 no “nanoro hevitra” ny hiala